किन रिसाइन् ‘चरी’की प्रेमिका खुस्बु ? - Dainik Nepal
किन रिसाइन् ‘चरी’की प्रेमिका खुस्बु ?
दैनिक नेपाल २०७१ भदौ ४ गते १८:०६
काठमाडौ, ४ भदौ । प्रहरी कारवाहीमा मारिएका भनिएका डन दिनेश अधिकारी ‘ चरी’ की प्रेमिका खुस्बु ओलीले केही पनि नबुझी मिडिया आफू विरुद्ध खनिएको आरोप लगाएकी छिन ।
पूर्व प्रेमी अर्पण कोइरालाले आफ्नो सात करोड रुपैँया खाएको भनी गरेको प्रचारविरुद्ध आफै पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर उनले अर्पणले मिडियाबाजी गरेको दाबी गरिन् ।
उनले भनिन– ‘अर्पणको काठमाडौमा तीन वटा घर नै थिएन । बिजुली बजारमा भएको घर बालकोटमा बनाउँछु भनेर बेचेको तर अन्तिममा सबै पैसा पोखराको ग्राण्ड क्यासिनोमा सक्यो । पछि मैले नै थप पैसा बुझाएर त्यहाँबाट छुटाएर ल्याएको हुँ ।’
आफू लामो समयदेखि भारतमा परिवारको उपचारमा भएको भन्दै मिडियाबाजी गरिरहेका अर्पण २१ दिन पहिले फर्पिङमा नै रहेको दावी गर्दै खुस्बुले आफूले यसको प्रमाण समेत आवश्यक पर्दा पेश गर्ने बताइन ।
बुबाले जग्गा बेचेर सन् २००९ मा बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा पढ्न गएको र अर्पण कोइराला २०११ मा मात्र गएकोले उनको लगानीमा आफूले पढेको भन्ने कुरा वाहीयात भएको खुस्बुको दाबी छ । उनले भनिन– ‘म निक इन्स्टिच्यूटबाट बेलायत गएको हुँ । त्यहाँका सञ्चालक सुरज राजभण्डारीसँग बुझे पनि हुन्छ ।’
ओलीले अर्पणसँग आफ्नो प्रेमसम्बन्ध भए पनि सन् २०११ बाट पूर्ण रुपमा टुटेको दाबी समेत गरिन् । निकै प्रयास गर्दा पनि गलत बानी नछाडेपछि अर्पणसँगको सम्बन्ध टुटेको उनले बताइन् ।
‘अर्पणलाई मैले भारत नयाँदिल्लीको साईक्रयाटिक एण्ड रिहाविलिटेसन सेन्टरमा उपचार गराएको हुँ । उ अफिम जस्ता लागूपदार्थको सेवक थियो । तर पनि ऊ सुध्रेन । नेपाल आएपछि पनि उस्तै पैसा उठाउँदै हिड्न थाल्यो, त्यसपछि हाम्रो सम्बन्ध टुट्यो ।’, खुस्बुले भनिन्, ‘मैले उसलाई बुढानिलकण्ठको घरमा चार जना केटीहरुसँग नग्न अवस्थामा प्रत्यक्ष भेटेपछि उसलाई छाडेको हुँ । जीवनमा व्यापार घाटा नाफा भनेको त भैहाल्छ । तर उसको चरित्र नै खराब भएर मैले छाडेको थिएँ । उसले मेरो बुवासंग लिएको पैसा पनि तिर्न सकेको छैन् । उसले दिएको चेक बाउन्स भएको छ ।’
खुस्बुले अर्पणले असराफ खानलाई सम्बोधन गरेर अन्डरवल्र्ड डन इब्राहिम दाउदलाई पनि इमेल लेखेको भन्दै इमेलको स्क्यान कपी पत्रकारहरुलाई देखाएकी थिइन् ।
अर्पणसँग सम्बन्ध टुटेको छ महिनापछि दिनेश अधिकारी चरीसँग आफ्नो चिनजान भएको भन्दै उनले आफूसँग सम्बन्ध हुँदा चरीको नाममा कुनै उजुरी नभएको समेत जिकिर गरिन् । चरीको सालिनताबाट आफू प्रभावित भएको र उसको प्रेम प्रस्ताव स्विकारेको खुस्बुको प्रस्टीकरण छ ।